Archive du 20170510
Hery Rajaonarimampianina Tsy ho kandida intsony ?
Maro ny zavatra tsy hampoizina mety hiseho mandra-pahatongan�ny tena fotoana hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena amin�ny 2018, ka efa manomboka miseho tsikelikely amin�izao fotoana.
Ihanta Randriamandranto �Misy fifanoherana ny fifidianana 2018�
Antomotra ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin�ny taona 2018, saingy mbola maro ny zavatra mifamahofaho ao anatiny.
KMF/Cnoe Afaka mamaritra tsara ny alimanakam-pifidianana ny CENI
Andrasana ankehitriny ny ketrika fanatsarana ny lal�m-pifidianana avy amin�ny Ceni (Commission Electorale Nationale Ind�pendante) taorian�ireo atrikasa fakan-kevitra miaraka amin�ny soso-kevitra
Taratasin�i Jean Hiverina any anaty ala
Miarahaba Jean a! Tena efa ho entinareo mihemotra foana moa izany izahay ry Jean tao anatin�izay 3 taona nitantananareo anay izay ka dia ny niafaranay dia naleo mihitsy namolavola drafitra vaovao e! Satria efa hitakitanay ihany hoe manina ny taloha ianareo dia toa tsy te hanahirana anareo loatra izahay.
Fiondranana an-tsokosoko mankany Koweit 9 vavy indray no nampidirina am-ponja
Mihamahazo vahana hatrany ny fandefasana vehivavy hiasa an-tsokosoko any ivelany tato ho ato.
Fanavotana ny tontolo iainana Fanodinana fako no vahaolana
Tokony hisy politika sy fikarohana akora vaovao mikasika ny fampiroboroboana ny asa tanana eto amintsika, hoy ny tale jeneraly misahana izany eto amintsika, Julien Rakotonaivo.
Fitantanana ny tsena Nasiana fandaminana vaovao
Hihatsara kokoa ny fitantanana ny tsena eto an-drenivohitra manomboka izao. Nisy mantsy ny fanendrena lehiben�ny sampandraharaha vaovao miisa enina, manerana ny Boriborintany enina, entina hanampiana sy hanamorana ny asan�ny lehiben�ny tsena. Ankoatra izay dia nametrahana lehiben�ny tsena ihany koa isaky ny tsena goavana eto an-drenivohitra, mbola tsy manana izany.
RF2 Dio Amboditsiry Tetikasa vaovao ny famokarana �autoblocant�
Mizotra tsara ny fanodinana fako ho lasa zezika sy saribao sahanin�ny Rantsana Fidiovana Fahadiovana Dio Amboditsiry.
Valanjavaboarin�Andringitra Vazaha no tena mpitsidika azy
Valanjavaboary anisan�ny be harena voajanahary indrindra eto amintsika i Andringitra, raha ny fanazavana azo avy eo anivon�ny Madagascar National Park.
Ny lohany indray no matsatso !
Ny fary no azo atao fanoharana mikasika ny toetra sy ny fomban�ny mpitondra ankehitriny, ka tonga amin�ilay fitenenana hoe ny lohany indray no matsatso.
Vondrona Eoropeanina Mailo amin�ny mpitondra Malagasy
Ao anatin�ny fanamarihana ny faha-60 taona nijoroany ny vondrona Eoropeanina amin�izao fotoana izao, ka nisy ny lahateny mikasika izany nataon�ny masoivoivohony eto Madagasikara, Antonio S�nchez-Benedito teny amin�ny Villa Iranja Tsarasaotra omaly.
Fandraharahana ara-bola Ny 18%-n�ny sehatra ara-dal�na no misitraka azy
Notontosaina tetsy amin�ny Le pav� Antaninarenina omaly ny atrikasa mikasika ny fanapariahana ny fandraharahana ara-bola eto amintsika.
�Robot� 300 hasolo ny mpiasa Mihorohoro ny mpiasan�ny Ultramaille
Efa misy ny mampiasa ny �Robot� ho solon�ny olona miasa amin�ireny orinasa afaka haba ireny amin�izao fotoana izao fa tsy honohono intsony.
�Taux directeur� 9% Hampihisatra ny fampiasambola
Tsy resy lahatra amin�ny fampisondrotan�ny komity mpikirakira vola eo anivon�ny Banky Foiben�i Madagasikara ny �taux directeur� ho 9% manomboka rahampitso 11 mey 2017 ny fianakaviamben�ny mpahay toekarena Malagasy.
Ambohitromby-Ambodirano, Ambatondrazaka Jiolahy iray no lavon�ny balan�ny zandary
Mihetsika amin�ny fampandriana fahalemana ny tany any an-toerana ny zandarimariam-pirenena ao amin�ny Faritra Alaotra Mangoro.